​ओलीले लिए प्रधानमन्त्रीको सपथ
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट बिहीबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएका हुन् ।
राष्ट्रपती भण्डारीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८० अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई पद....
​राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी सुरु
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी सुरु गरेको छ । बिहीबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ५ राजनीतिक दलसँग निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनको सम्बन्धमा औपचारिक छलफल सुरु गरेको हो ।
छलफलमा आयोगले फागुन २१ गते राष्ट्रपति र चैत....
​ओलीसँगै सपथ लिँदै पोखरेल र ज्ञवाली !
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् । नियुक्त भएसँगै ओलीले साँझ ४ बने राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा सपथ लिँदैछन् ।
ओलीसँगै एमालेबाट ईश्वर पोखरेलले उपप्रधानमन्त्री र प्रदिप ज्ञवालीले मन्त्री पदका लागि सपथ लिने स्रोतले जनाएको छ ।
​को हुन् केपी ओली ?
काठमाडौ । विहीबार एमाले पार्टी अध्यक्ष खड्गप्रसाद (केपी) ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । शेरबहादुुर देउवाले राजिनामा दिएपछि उनी प्रधानमन्त्री बन्न लागेका हुन् । बाम मोर्चाको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा सिफारिसमा परेका उनले विहीबार साँझसम्ममा सपथ लिनेछन् ।
ओलीको जन्म वि सं २००८ साल फागुन ११....
​प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिँदै गर्दा विदेश शयरमा जाने मन्त्रीहरु को को ?
काठमाडौं । बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । तर, उनका मन्त्रिपरिषदका दुई मन्त्री भने अस्ट्रेलिया भ्रमणमा छन् ।
हाल अर्थराज्यमन्त्री उदयशमशेर राणासहित कृषिराज्यमन्त्री सरिता प्रसाईं पनि अस्ट्रेलियाका विभिन्न स्थानको भ्रमणमा रहेका छन् ।
एक साताअघि मन्त्रालयका दुई सहसचिवसहित ५ जनाको....
जाँदा जाँदै के भने देउवाले ? (सम्बोधनको पूर्ण पाठ)
काठमाडौं । राजिनामा दिँदै शेरबहादुर देउवाले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको जनाएका छन् । उनले दिएको राजिनामा सम्बन्धि सम्बोधनको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तीनै तहको चुनाव....
​प्रधानमन्त्री देउवाले दिए राजीनामा, ओलीले आजै सपथ लिने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिएका छन् । नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि देउवाले देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै देउवाले चुनाव गराउनु आफ्नो कार्यकालको ठूलो सफलता भएको बताए । सरकारको....
​ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बन्न गरे दाबी पेश
काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सामु आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी पेश गरेका छन् ।
ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका नेताहरु शितल निवास पुगेर राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न संवैधानिक....
देउवा राजीनामा दिँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राजीनामा दिने तयारीमा जुटेका छन् । उनले आफ्नो बहिर्गमनअघि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । बुधबार नै प्रधानमन्त्री देउवाले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए । तर निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउन ढिला....
​रोकियो देउवाको राजीनामा, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार दिने भनिएको राजीनामा रोकिएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरेको भन्दै देउवाले राजीनामा रोकेका हुन् ।
सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन नगरेसम्म राजीनामा दिन नहुने देउवा निकटले तर्क गरेपछि देउवाको राजीनामा रोकिएको....